သဒ္ဓါလှိုင်း: ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတပါး
ဖုန်းသံမြည်လို့ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံး ကြားရတာက သမီး `နေကောင်းရဲ့လား´ တဲ့…။ ကျမကလည်း ဖေကြီးတို့ `နေကောင်းရဲ့လား´ လို့ ပြန်မေးတာပေါ့။ ကျမက နေကောင်းတယ် ဆိုရင်လည်း တကယ် နေကောင်းရဲ့လား…ဒါမှမဟုတ် စိတ်ချမ်းသာအောင် နေကောင်းတယ်လို့ ပြောတာလားတဲ့…။ ကျမကလည်း တကယ် နေကောင်းတာပါ လို့ ပြောနေကျပါ။ ဒါဆို ဒီနေ့ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းရော လုပ်ပြီးပြီလားတဲ့။ ထပ်မေးပါတယ်…။ ကျမကလည်း လုပ်ပြီးပါပြီပေါ့။ တခါတလေ အချိန်မရရင် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်လိုက်ရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် နည်းနည်း ပျင်းနေရင်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ အခုဆို နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန် လုပ်တဲ့ အကျင့်တခု ဖြစ်နေပါတယ်။ မနက် မိုးလင်းတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို အရင်လုပ်လိုက် ရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်…။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးရင် ပေါ့ပါး လန်းဆန်းပြီး နေလို့ ကောင်းသွားပါတယ်။ အဓိကက မနက်စောစော ချွေးထွက် သွားဖို့ပါ။ ချွေးထွက် သွားပြီးရင် ပေါ့ပါး သွားပါတယ်။ ကျမလည်း ပြောပါများတော့ လေ့ကျင့်ခန်းကို မဖြစ်မနေ လုပ်နေရပြီလေ။ ပြီးမှ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှိခိုး၊ အလုပ်သွားဖို့ အတွက် ရေချိုး၊ ပြီးတော့ ထမင်းပူလေး စားပေါ့။ ဒါကတော့ နေ့စဉ် လုပ်နေကျပါ။ မနက် မိုးလင်းလို့ အဲဒီထဲက တခု မလုပ်လိုက်ရရင် တနေ့လုံး တခုခု လိုနေသလို နေရတာ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေပြီ။ ကျန်းမာဖို့ အတွက် နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် လုပ်သင့်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း ကလည်း အကောင်းဆုံးသော ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း ပါပဲ။
လေ့ကျင့်ခန်း ကို ပုံမှန် လုပ်တာဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့ အတွက် အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ အ၀လွန်တဲ့ သူတွေကလည်း အစားကို လျှော့ပြီး စားဖို့ထက် ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ၀တဲ့သူရော၊ ပိန်တဲ့သူရော လေ့ကျင့်ခန်း ကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်က လေ့ကျင့်ခန်းကို အောင်ဆန်း ကစားကွင်း မှာ သွားလုပ် ပါတယ်…။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ အထဲမှာ အရမ်း ပိန်တဲ့ ကောင်မလေး တယောက် ရှိပါတယ်။ သူကတော့ ၀ချင်လို့ လေ့ကျင့်ခန်း ကို လုပ်တာပါ။ သူက အားကြိုး မာန်တက်နဲ့ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကောင်မလေးက ခြောက်လလောက် အတွင်းမှာ နည်းနည်း ကြည့်ကောင်းအောင် ၀လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု ကြောင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ပိန်ပိန် ၀၀ လေ့ကျင့်ခန်း ကို ပုံမှန် လုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ တချို့က လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ထက် အစားကိုသာ လျှော့ပြီး စားကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အစားလျှော့စားတာထက် လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန် လုပ်တာက ကျန်းမာရေး အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်….။
လူတယောက် အတွက် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါမှ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နိုင်မှာပါလေ…။ လူတယောက်ဟာ ကျန်းမာနေတုန်း ကျန်းမာခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံကို မသိပေမဲ့ ရောဂါတခုခု ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါလဲဆိုတာ လက်တွေ့ သိသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ပြီး ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးပါနော်…။ ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့ထဲမှာ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန် လုပ်သွားခြင်း ကလည်း အဓိက ကျပါတယ်။
ကျမတို့တွေ အချင်းချင်း အပြင်မှာ တွေ့ကြပြီ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနဲ့ ပြောကြပြီ၊ မေးလ်ပို့ကြပြီ ဆိုရင်လည်း ပထမဆုံး မေးကြတာက `နေကောင်းလား´ တဲ့။ နေမကောင်းဘူး ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့လဲ….၊ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ….၊ အခုရော…. ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ တန်းစီနေအောင် မေးကြ တော့တာ ပါပဲ။ အကြံဥာဏ် တွေလည်း ပေးကြပေါ့… ဘာလုပ်သင့်တယ်… ဘာစားသင့်တယ်… နဲ့….. ။ အားပေးကြနဲ့ပေါ့…။ ဒါကလည်း နေမကောင်းတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အားဆေးလေး တခွက်ပါပဲ။
မွေးနေ့မှာ ဆိုရင်လည်း မွေးနေ့မှ စ၍ နောင်နှစ်ပေါင်း အသက် တရာ့နှစ်ဆယ် ရှည်ပါစေတဲ့လေ…။ ဆုတောင်းကြတာများ… ။ အဲလို အသက်ရှည်ဖို့ အတွက် အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နဲ့ နေထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး ကို ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့။
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတပါး လို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ကိုတိုင် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရင်း…. အကျိုးရှိမဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင် ကြပါစေ…။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:05 PM
ဟုတ်တယ်နော် နေကောင်းလား How are you?
စပိုင်ဒီး ခါး နီဟောင်မား.. ဘာသာစကားတွေသာ ခြားသွားတယ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တွေ့တွေ့ချင်းမှာ လူ့အသက်ဆက်ရှင်စေနိုင်မယ့် လူ့ဘ၀မှရှင်သန်စေနိုင်မယ့် နေကောင်းလား ကျမ်းမာရဲ့လားဆိုတာလေးကို လူမျိုးတိုင်း မေးလေ့ရှိကြတယ်လေ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းလေးပဲနော်
ပျော်ရွှင်မှုဟာ သင်နဲ့ အတူ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ…
မနက်ဖန်ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျသွားနိုင်တယ်
သဘောထား ကွဲလွဲမှုကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ…
A Memory of My Grandparents (Sequel) -A Journey of Two Travellers